Maamulka iyo bulshada degmada Wadajir oo barlamanka ka dalbaday iney ansixiyaan xukuumadda |
Munaasabad lagu soo dhaweeynayay xukuumadda cusub islamarkaana baarlamanka looga dalbanayay, iney ansixiyaan ayaa xalay lagu qabtay xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada degmadaasi, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay suugaan qiiro leh oo lagu muujinayay taageerada xukuumadda cusub ee uu soo dhisay R/wasaare Cumar Cabdi-rashiid.
Gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed cabdulle Afrax oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in maamulka iyo bulshada degmada Wadajir ay soo dhaweynayaan golaha wasiirrada cusub ee uu soo dhisay R/wasaare Sharma’arke.
Wuxuu ka dalbaday mudanayaasha baarlamanka iney ansixiyaan xukuumadda cusub , isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay iney wax ka qaban doonaan howlaha loo igmaday.
“Isu imaatinkan waxaa uu ku saabsanyahay taageerada an u heyno madaxweynaha, R/wasaaraha iyo xukuumadda uu soo dhisay, bulshada Wadajir waxey ka codsanayaan baarlamanka iney ansixiyaan xukuumadda” ayuu yiri gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulle Afrax.